मुलुक साढे १० खर्ब ऋणमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मुलुक साढे १० खर्ब ऋणमा
जेष्ठ १४, २०७६ कृष्ण आचार्य
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालजस्तो देशले ऋण लिन अझ महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्ने बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको५० प्रतिशतसम्म लिँदा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा
गत वर्ष १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी थियो । ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आउँदा २३ अर्ब रुपैयाँ लाभाशंका रूपमा बाहिरिएको छ । ‘२०७५/७६ को फागुनसम्म वैदेशिक लगानीबापत २३ अर्ब ८९ करोड लाभांश भुक्तानी भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३४ अर्ब भुक्तानी भएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:११
कहाँ चुके सुरक्षा निकाय ?
जेष्ठ १४, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — संघीय राजधानीमा भएको शृंखलाबद्ध विस्फोटले सरकार प्रतिबन्धित समूहको गतिविधि नियन्त्रणमा चुक्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आइतबार अपराह्नदेखिका शृंखलाबद्ध विस्फोट, विस्फोटक पदार्थहरू फेला पर्नुले चन्द समूहका कार्यकर्ता राजधानीमा राम्रै सक्रिय छन् भन्ने देखाएको छ ।
ललितपुरको सातदोबाटोमा सोमबार विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्दै सेना । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर
समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्धको घोषणापछि पनि चन्द समूहका कार्यकर्ता यसरी सक्रिय रहनुले सुरक्षा निकाय कहाँ चुक्दै छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
फागुनको २८ गते चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै सरकारले त्यस समूहका नेता तथा कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउन, सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्न नदिन सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको थियो । प्रहरीले देशैभरि उक्त समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउलाई तीव्र पारेको थियो ।
पक्राउ परेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता अदालतबाट धमाधम छुटिरहेको र सोमबारको पूर्वघोषित बन्द सफल पार्न समूहले गरेको तयारीबारे सुरक्षा निकाय बेखबर थिएनन् । तैपनि राजधानीलाई नै आतंकित पार्ने यति ठूला गतिविधि कसरी हुन सके ? नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह आइतबार र सोमबारका घटनाले सुरक्षा चुनौती थपिएको टिप्पणी गर्छन् ।
दशक लामो माओवादी द्वन्द्वभन्दा अहिले अवस्था फरक देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पहिले विस्फोटजन्य घटना दुर्गम गाउँबाट सर्दैसर्दै सहरमा आउँथ्यो । अहिले सहर नै पहिलो टार्गेटमा देखिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा नयाँ तरिकाले सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘पछिल्ला घटनाक्रमबाट विस्फोट पदार्थ निर्माण गर्न सक्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने जनशक्ति चन्द समूहसँग रहेको बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रहरीको बुझाइमा प्रतिबन्धपछि विस्फोटक पदार्थ निर्माणमा ज्ञान भएका केन्द्रीय नेताहरूले भूमिगत रूपमा सक्रिय रहेर दोस्रो तहका कार्यकर्ता खटाएको देखिन्छ ।
पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीले पनि सरकारले भनेजस्तै कमजोर नभएको र चन्द समूहले विस्फोटक पदार्थ उपयोगको परम्परागत शैली कमजोर सुरक्षा संयन्त्रकै कारण अपनाएको बताए । ‘सहरकोबढ्दो जनघनत्व र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोर गुप्तचरी संयन्त्रको फाइदा चन्द समूहले उठाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
‘रिङरोड बाहिर र भित्रको कोर स्थानमा चन्द समूहले आफ्नो शक्ति देखाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । यसमा दोस्रो तहका कार्यकर्ता बढी परिचालित देखिन्छन्,’ उनले भने ।
उनले आइतबारका सबैजसो घटना विस्फोटक पदार्थ उपयोगसम्बन्धी ज्ञान नभएका दोस्रो तहका कार्यकर्ताबाट भएको बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वडीआईजी रवीन्द्र पण्डितले पछिल्ला विस्फोटलाई सुरक्षा कमजोरीका रूपमा भन्दा पनि फरक ढंगबाट बुझ्नुपर्ने बताए । ‘यस्ता घटनाहरूको कारक तत्त्वमाथि नै विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला घटनाहरू मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएर आफ्नो स्वार्थ साध्ने अभीष्टका रूपमा भएका छन् ।’
पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माले पछिल्ला घटनाक्रमले चन्द समूहसँग हतियार र विस्फोटक पदार्थ उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति रहेको पुष्टि गरेको बताए । ‘प्रतिबन्धपछि चन्द समूहले शक्ति सञ्चय गरेको जस्तो देखिएको छ । पक्राउ पर्दै, छुटदै गरेपछि उसले रणनीति बदल्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीको मनोबल बढाउँदै सुराकी र प्राविधिक अनुसन्धानमा लगानी नबढाई हुन्न ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०७:०६
स्थायी समितिमा दाहालको प्रतिवेदन : एकता नटुङ्गिँदा गुट बढे
१४ मृतकमध्ये १२ जनाको सनाखत
आन्तरिक विषयमा प्रवेशै नगरी सकियो कांग्रेस बैठक
घाइतेहरुलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो
स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले पेस गरे राजनीतिक प्रतिवेदन
दुर्घटनाका घाइते भन्छन्: चालक झ्यालबाट हाम्फालेर बेपत्ता भए